2015 ~ MM Daily Star
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအား စော်ကားမော်ကား ပြုမူ့ အ...
SSPP/SSA တာဆန်ပူး ခံစစ်စခန်းကျ
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော တိုင်းရင်း...
မည်သည့်အခါမှ အကောင်းပြောမခံရသောအစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆ...
ကိုရဲမိုး၏ facebook စာမျက်နှာမှ
54 ခြံထဲက သတင်းများ
လောက်ကိုင်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး အပါအ၀င်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမျိုးဖျက်မဟုတ် ဝေဖန်သောသူ တ...
အပစ်ရပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု အမေရိကန် ချီးကျူးကြိုဆို...
ဆီးရီးယားတွင် ရုရှားအနေဖြင့် TOS-1A အမျိုးအစား ဒုံ...
တစ်ပါတ်လျင် (၄)ကြိမ်ခန့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ဆီးကျော...
ငိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် မပါဘဲ အောင်မြင်စွာပြီးဆံ...
နိုင်ငံအကြိးအကဲအား စော်ကားမူ့ 
ကိုရမ်ကျမ်းမြတ်အား လေ့လာနေသော အန်တီစု
7Day ဂျာနယ်နဲ့ သောင်းစုငြိမ်းဘာလဲဘယ်လဲ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှ လေးချောင်းထောက်များ
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖုိုး၏ မ...
11:36 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
ဖုန်ကြားရှင်၏ တောင်းဆိုချက်အား ...
ဖုန်ကြားရှင်တပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ...
နိူင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို... ထိပါးထားသည့်အတွက် ...
အကြွင်းမဲ့ လက်နက်ချပြီးမှသာ ...
သမ္မတ နှင့် တပ်ချုပ်တို့ မှ ...
ထိူမူမှာ လုံးဝ အပြောင်းအလဲမရှိကြောင်း ..
သမ္မတရုံး ညွှန်မှူး ဦးဇော်ဌေးမှ တရားဝင်ပြောကြား ...
11:30 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
သတိထားမိသလောက် ပြောရရင် ...
သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းဟာ ...
စကားကို လိပ်ပတ်လည်အောင် မပြော ...
စကားပြော အလွန်လောကြီးတယ် ...
ပထမဆုံးတစ်ကြိမ် ကွဲတာက ...
ကျွန်တော်တို့ လဲ ...
တရုတ်ကြောက်ရပါတယ် ဆိုတဲ့စကား ...
တရုတ်ဟာ လူဦးရေ သန်း ၁၈၀၀ကျော်တယ် ...
ကိုယ်တွေ နဲ့ နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နိူင်ငံ ...
အများကြီး စွက်ဖက်ခဲ့တယ် ...
သူတို့  စွက်ဖက်တိုင်းလဲ ...
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ စစ်မီးတွေ ...
ဆိုလိုတာက အရာအားလုံး ...
တရုတ်အကြိုက် လိုက်လုပ်ဖို့  မလိုပေမယ့် ...
တရုတ်ရဲ့ သဘောထားကိုတော့ ...
ကျွန်တော်တို့ အမြဲထည့်သွင်း တွက်ချက်စဉ်းစားရတယ် ...
ဒါဟာ အရှိတရား မှန်တယ် ...
သို့ သော် ... ဒါကို ရေလည်အောင်မပြောဘဲ ...
ကျွန်တော်တို့ က ...
တရုတ်လဲ ကြောက်ရသေးတာကိုးလို့  ...
ပြီးစလွယ် ထပြောတော့ ...
အကြီးအကျယ် ခံခဲ့ရတယ် ...
သို့ သော် ...
ဒါက မီဒီယာခေတ်ဦးမှာ မို့  ...
ဒီက မီဒီယာတွေနဲ့ ...
အတွေ့အကြုံ မရှိလို့  ဖြစ်ခဲ့တယ်ပဲ ထားပါတော့ ...
ခွင့်လွှတ်တွေး တွေးခဲ့တယ် ...
ဒုတိယတစ်ကြိမ် ဆန္ဒစောတာက ...
စွမ်းရည် ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ ...
မပေးသင့်ဘူး ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ထပြောတော့ ...
တပ် အသိုင်းအဝိုင်းက အကြီးအကျယ် ဒေါပွပြီး ...
ထ ကလော်တုပ်ကုန်တယ် ...
ဒီကိစ္စကို ကလော်တုပ်ကြတဲ့ အထဲမှာ ...
တိုင်းမှူး ၊ တပ်မမှူး တစ်ချို့ တောင် ပါခဲ့တယ် ...
စစ်မြေပြင်မှာ ပေးတဲ့ စွမ်းရည်ဘွဲ့တွေဟာ ...
အသက်ကို ပဓာနမထားတဲ့ ...
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ...
စွန့် စားမှုတွေအပေါ်မှာ ပေးတာဖြစ်တယ် ...
ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်ဝါနဲ့တိုက်လို့  ...
ပေးတာမျိုး မဟုတ် ...
စစ်သားဆိုတဲ့ အမျိုးဟာလဲ ...
ရွေးချယ်ခွင့်ရတာမျိုး မဟုတ် ...
အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်မှာလဲ ...
ရာနဲ့ချီပြီး ပေးခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ် ...
ငြိမ်းချမ်းရေး စေ့စပ်ညှိနိူင်းမှု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ...
ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်တယ် ....
သို့ သော် ... ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက ...
နှစ်ဘက်ခံစားချက်ကို ထည့်တွက်ပြီး ...
လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အရာမျိုးဖြစ်တယ် ...
တစ်ဘက်ဘက်က သွားရပ်တည်ပြီးပြောလို့  ...
တစ်ဘက်က အကြီးအကျယ်ဒေါပွကုန်ရင်လဲ ...
ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ အောင်မြင်မှာမဟုတ် ...
နောက်ဆုံးမှာ ဦးအောင်မင်းအနေနဲ့ ...
အခုတစ်ခါ ထပ်ဖြစ်ပြန်ပြီ ...
သမ္မတကြီးက ဖုန်ကြားရှင်ကို ...
မြန်မာပြည် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ...
နေခွင့်ပြုထားတယ် ထလုပ်တယ် ...
ဘယ်လို ပုံစံမျိုး နေခွင့်ပြုတာလဲ ???
ဒါ သိပ်အရေးကြီးတယ် ...
ဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထည့်မပြောဘူး ...
သေနတ်သံတိုးသွားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး ...
ဒီ စစ်မှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ...
နီရဲ လတ်ဆတ်နေဆဲပဲ ...
သို့ သော် ... ကျွန်တော်တို့ ဟာ ...
တစ်ယူသန် တစ်ဇောက်ကန်းတွေမဟုတ် ...
ကလဲ့စား ချေကိုချေမှ ရမယ်ဆိုသူတွေလဲ မဟုတ် ...
တပ်မတော် အနေနဲ့ ...
ရန်သူက အညံ့ခံရင် ...
ဘယ်လို ပြုမူဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာ ...
အထင်အရှားပါပြီး ဖြစ်တယ် ...
ဖုန်ကြားရှင် အနေနဲ့ ...
အသက် ရှစ်ဆယ် ကိုးဆယ်မကလို့  ...
တစ်ရာ့ငါးဆယ်ပဲ ရှိရှိ ...
မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်နေချင်ရင် ...
နည်းလမ်းတစ်ခုသာ ရှိတယ် ...
အကြွင်းမဲ့ လက်နက်ချလိုက်ဖို့ ပဲ ...
ဒီတိုက်ပွဲမှာ အသက်ပေးတိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ...
သစ္စာမဖောက်ရာ ရောက်လိမ့်မယ် ...
တပ်ချုပ် ကပါ ...
ဖုန်ကြားရှင် လက်နက်ချမှပဲရမယ် ...
တန်းတူ ငြ်ိမ်းချမ်းရေးယူဖို့  မဖြစ်နိူင်ဘူးလို့  ...
အပြတ် ပြောထားပြီးသား ဖြစ်တယ် ...
ငြိမ်းချမ်းရေး Team Leader ကြီးက ...
လက်နက်ချပြီးမှ ဆိုတဲ့ စကားလေး...
ဘာလို့ မေ့ကျန်ခဲ့သလဲတော့ မပြောတတ် ...
ခဏခဏ လောကြီး ပြီး စကားမှား ...
စကားကို လိပ်ပတ်လည်အောင် ...
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နည်း သင်တန်း ...
ပြန်တက်ဖို့ လိုနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ...
အကြံပြု တင်ပြလိုတယ် ... ။ ။
11:29 KIA No comments
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၂ တပ်ရင်း၁၄ ဌာနချုပ်ထဲတွင် ရှမ်းလူမျိုးနှင့် ဗမာလူမျိုး
၃၀ ကျော်ခန့် လူသစ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံနေပါသည်။
ထိုအပြင် ထို တပ်မဟာ ၂ က တပ်များသည် နာဂနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ကျောင်းမှ ဂိုက်ဆရာလူငယ် ဂေါ်လှ နှင့် ရှန်းမိုင်အောင်ကို ရှင်ဗွေယန်သို့ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့
တနိုင်းမြို့ နယ် ၊ လဂျားဘွမ်ရွာက ကျေးရွာငွေစုငွေချေးဥက္ကဋ္ဌ ဦးဂျေယော နဲ့ ရွာသား ၄ ဦးကို ဖမ်းခေါ်သွား ၊ ရှင်ဗွေယန်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးထဲ တွင်ဖမ်းဆီးထား
ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကေအိုင်အေ အနေဖြင့် တပ်မတော်မှ
SSA/SSPP စခန်းများအား တပ်မတော်မှ သိမ်းပိုက်နိုင်မူ့ ကြောင့် စစ်ရေး
00:55 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၁၇
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ၂၂ ရက်သာ လိုတော့သည်နှင့်အမျှ ပါတီကြီးတစ်ခုဟာ နိုင်ငံတော် အာဏာရရှိရေးနှင့် အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် ပြောဆိုလာပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုအနေဖြင့် ၎င်း၏ အန္တိမ ရည်မှန်းချက်သည် နိုင်ငံတော် အာဏာရယူရန် ဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်ကာ အလိုလောဘတိုက်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် မဟာဗျူဟာ အမှားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ တတ်စွမ်း နိုင်သည်ကိုသာ မူဝါဒအဖြစ် ပြည်သူကို ချပြသင့်ပေသည်။ ပါတီတစ်ခုအနေဖြင့် လောက ဓမ္မတာ တရားအတိုင်း အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် ရှိနေသည်ကို သတိပြုသင့်သည်။ တရားသဘော ယှဉ်၍ ဦးစီးသူမှာ လွတ်လပ်၏။ ရာထူး မျှော်နေသူ၊ မျှော်လင့်တောင့်တ၍ ပါတီ အလုပ်လုပ်သူများသည် မလွတ်လပ်ပါ။ အသက်ကြီးလေ စိတ်သဘော ထား သေးလေဖြစ်လာတတ်သည်။ စိတ်ဖိစီး၍ အသက်တိုပေမည်။ ရာထူးရရေးနှင့် မိမိပါတီသာ အနိုင် ရရေးဟူသော အစွန်း နှစ်ဖက်ကို ရှောင်၍ အလယ်အလတ်၌ မဇ္စျိမပဋိပဒါ ကျအောင် ကျင့်ရာသည်။
နောက်တစ်ခုမှာ ငါတို့ပါတီက ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီ များများရအောင် ပေးပါမည်ဟုလည်း ကတိမပေးသင့်ပေ။ မည်သည့်ပါတီ ခေါင်းဆောင်မှ ဒီမိုကရေစီကို မျက်လှည့်ပြသလို “ရော့ဒီမှာ ဒီမိုကရေစီ” ဟုဖန်ဆင်း၍ မရနိုင်ပါ။ ဒီမိုကရေစီသည် ကြွေးကြော် ရန်မဟုတ်။ ပြည်သူတို့၏ အသိပညာ၊ စည်းကမ်း တို့ဖြင့်သာ ထိုက်ထိုက် တန်တန် ခံစားကျင့်သုံး သွားရမည့် အရာဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို သိရန် ပြည်သူတို့အား ပညာပေးရန် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များတွင် တာဝန်ရှိ ကြသည်ကို မမေ့အပ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်မှာ ဒွန်တွဲ နေပါသည်။ အခွင့်အရေးကို ခံစားပြီး တာဝန်မယူခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဆန့်ကျင်၏။ ဤသို့ကျင့်သုံးက ကြာရှည် မခံတတ်ပေ။ တာဝန်လည်းခံ၊ ထိုက်တန်သော ခံစားခွင့်ကိုလည်း ရမှသာ တရားနည်းလမ်း ကျပေလိမ့်မည်။
မည်သည့်ပါတီနှင့် ခေါင်းဆောင်မဆို တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လိုလား တောင့်တချက်၊ ကတိ၊ သန္နိဋ္ဌာန်၊ ကျင့်ဝတ်သီလ နှင့် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍ ကျင့်ဝတ် သီလစောင့်မှ၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားမှ၊ တာဝန်ကျေမှ စသည့် နိုင်ငံရေးယဉ် ကျေးမှုများနှင့် ပြည့်စုံမှသာလျှင် အနာဂတ်၌ ခေါင်းဆောင်မှု နေရာအတွက် ပြည်သူတို့က ကြည်ဖြူစွာ ရွေးချယ်မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပေ။
ထို့ကြောင့် ကိုးဆယ်ကျော် ရှိနေသော ပြိုင်ပွဲဝင် ပါတီများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွင်း အားသွန်ခွန်စိုက် ယှဉ်ပြိုင်ရ မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကြိုးဝိုင်း စည်းကမ်းကိုလည်း လိုက်နာ၊ ဘေးမှအားပေးကြမည့် လူထုပရိသတ် တို့၏ အသံကိုလည်း နားထောင်ကာ နိုင်ငံအတွက် ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းရွက်သွားမည်ဟု ရိုးသားသော စိတ်စေတနာဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပါက ပြိုင်ပွဲ၌ ရှုံးခဲ့လျှင်လည်း လူထု၏ မေတ္တာအပြည့် ရပေလိမ့်မည်။ ပြိုင်ဘက်ပါတီကို ထိုးနှက်ခြင်း၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလအပါအ၀င် ပြိုင်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များကို မဲမထည့်ခိုင်းခြင်း၊ အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရန် အကြိမ်ကြိမ်မဲထည့်ခိုင်းခြင်း မှာ ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့် ဒီမိုကရေစီပါတီ မဟုတ်တော့ဘဲ အာဏာ လိုလားသည့် အာဏာရှင်ပါတီဖြစ်နေကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပြည်သူများ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များအား စော်ကားမော်ကား ပြုမူ့ အားအရေးယူခြင်းမှ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာများ
00:40 ကြားဖြတ်သတင်း No comments
အရေးယူတာလည်း ယူစေချင်ပါတယ် သို့ သော်လည်း ယုန်ထောင်ကြောင်မိ ၊
ခုတ်ရာတစ်ခြားပြက်ရာတစ်ခြားဖြစ်မှာလည်း စိုးပါတယ် မဟုတ်တဲ့လူတွေ ထိခိုက်
နစ်နာမှာလည်း မလိုလားပါဘူး......... ((ဒီပို့ စ်လေးတော့ ရှယ်ပေးစေချပါတယ် မဟုတ်တဲ့
လူတွေ နစ်နာမှာစိုးလို့))
FaceBook ပေါ်ကနေ အသိအလင်း ကြော်ငြာပါရစေ
ကျွန်တော့် ကူညီကြပါ တင်ထားတဲ့စာနဲ့ပုံကို Screenshoot ရိုတ်ပြီး ပြန်တင်ပေးကြပါ Share လျှင် ကျွန်တော့် အကောင့်ပျက်သွားလျှင် ပြည်သူလူထုများ အထင်လွဲမှား မသိလိုက်ကြမှာဆိုးလို့ပါ
မသမာသူ သုံးနေသော Fake အကောင့်အား Report မတင်ကြပါနဲ့
Facebook အတု သုံးစွဲသော Zaw Htoo Mg or Lunch Zaw Soe Win အကောင့်အပြင် နာမည်တူ Facebook များ ပေါ်ပေါက်လာသော ပြသနာများမှာ ကျွန်တော်နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ဒေါပုံ ရဲစခန်းသို့ ၁၄.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၁၁:၃၅ အချိန်တွင် မှတ်တမ်းတင် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း Facebook ပေါ်မှ အသိလင်းကြော်ငြာအပ်ပါသည်
Ko Pu Tu နာမည်ဖြင့် FB သုံးစွဲခဲ့ပြီး ပုံများတင်ခဲ့ရာ
ကျွန်တော် ၂၈ နှစ်မှ မှတ်ပုံတင်ရလို့ ပျော်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကို ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ၂ ရက် တင်မိခဲ့ရာပြန်ဖျတ်လိုက်ပေမဲ့ ယုတ်မာသူတချို့ ဖုန်းထဲတွင် Save ထားပြီး ယခုအခါ ကျွန်တော့်အား ချောက်ချ ပြီး Report ထုခဲ့ရာ Lu Zaw Soe Win နာမည်ဖြင့် အကောင့်ပြန်ရပြီး ကျွန်တော့် မူရင်း အကောင့် ဒီတခုပဲ သုံးစွဲပါသည်
Zaw Htoo Mg အကောင့်ဖြင့် ကျွန်တော့်မှတ်ပုံတင်အား Cover တင်ကာ မသမာသူတယောက်သည် နိုင်ငံတော် အရာရှိများအား ဆဲဆွဲနေလို့ Report ဝိုင်းထုရာ Zaw Htoo Mg အကောင့်မှာ လော့ကျသွားပါသည်
၁၅.၁၀.၂၀၁၅ ရက်နေ့ညနေဘက်တွင် Zaw Htoo Mg အကောင့်မှာ Name အသစ်ဖြင့် Log ကျရာ ပြန်ပွင့်လာပြီး
Lunch Zaw Soe Win အမည်ဖြင့် မသမာသူမှာ ဆက်လက် သုံးစွဲနေပါကြောင်း မသိသူမျာအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
20:46 SSA No comments
SSPP/ SSA( ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့သည် အောက်တိုဘာလ အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့်တိုက်ပွဲများတွင် (၆၀) ဦးခန့်သေဆုံး ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရ ရှိမှုမှာ ကျဆုံးအင်အားထက်များပြားလျက်ရှိကြောင်း မြေပြင်သတင်းအရ သိရသည်။
ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့တွင်တပိမဟာ (၅)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး
ခန့်မှနိး အင်အား ၁၅၀၀ ခနိ့ရှိပါသည်။
ယခုရက်ပိုင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်များတွင် ထိခိုက်မှုများပြားလာသဖြင့် ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ပန်ဖနှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ခေးတိုငိး တို့ကြာသဘောထားကွဲလွဲ လာပြီး ခေးတိုင်းမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး
အဖွဲ့အစည်းအတွင်း နှစ်ခြမ်းကွဲနေပြီး ခေါင်းဆောင်ပန်ဖ မှ ခွဲထွက်လိုပါက ခွဲထွက်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားသဖြင့်
ခေးတိုင်းသည် နယ်မြေခံ တပိရင်းသို့ တိုက်ပွဲများရပ်စဲရန် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်လိုကြောင်း ဆက်သွယ်လာခဲ့သည်။တပ်ဖွဲ့ဝင်များကြားတွင် တိုက်ပွဲများရပ်တန့်လိုသူပိုများနေပါသည်။
အခြားသတင်းတစ်ရပ်အရ လက်ရှိတိုက်ပွဲများအတွင်း ဝမ်ဟိုင်း SSPP/ SSA နယ်မြေနှင့် ဝနယ်မြေကြား စပ်ကြားဒေသန္တရ နယ်မြေသို့
ဝ တပ်ဖွဲ့မှ တပ်မဟာ (၁) ခုသည် သံလွင်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းချီတက်လာနေပြီး လက်ရ်ှအချိနိထိ သံလွင်မြစ်အားဖြတ်မကူးသေးကြောင်းသိရသည်။
ဝတပ်ဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိစပ်ကြားမြေကို ထိမ်းသိမ်းရနိဟု အကြောင်းပြ နိုင်သော်လည်း
တစ်ဖက် မှ ဝမ်ဟိုင်းအဖွဲ့များအတွက် ပိတ်ဆို့ခံထားရသကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်။
ဝတပ်မဟာတွင် အမြောက် တပိဖွဲ့ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
20:14 SSA No comments
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ပါတီ၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း(SSPP/SSA) ၏ ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ်အတွက် အရေးပါသည့် ခံစစ်စခန်း တခုဖြစ်သော တာဆမ်ပူး ကူးတို့ဆိပ်ကို ယနေ့ဖယ်ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း SSPP/SSA ကပြောသည်။တာဆမ်ပူး ကူးတို့ဆိပ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး အစိုးရ၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံတပ်များ နှင့် SSPP/SSA ဝမ်ဟိုင်း ဌာနချုပ် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များအကြား ယခုလ ၆ ရက်နေ့မှစတင်ကာ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၁၀ ရက်မြောက်နေ့ တွင် ယခုကဲ့သို့ ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း SSPP/SSA ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလက ဧရာဝတီ သို့ ပြော သည်။“တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီး မကြီးထွားစေချင်တာရယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လယ်ယာမြေ ရိတ်သိမ်းချိန်မှာ ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် နေကြရတာတွေရယ်ကြောင့် ကျနော်တို့ တာဆမ်ပူးကို ဖယ်ပေးလိုက်တာ၊ ဒါဟာ ဗဟိုက တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင် အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု သူက ဆိုသည်။တာဆမ်ပူး ကူးတို့ဆိပ်သည် SSPP/SSA အဖွဲ့အခြေစိုက်ရာ ဝမ်ဟိုင်းဌာနချုပ် အတွက် အရေးပါသော ခံကတုတ် တခုဖြစ်ပြီး ဤသို့ဆုတ်ပေးလိုက်ရခြင်းကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် SSPP/ SSA အပေါ် စစ်ရေးအရ ပိုမိုစိုးမိုးသွားနိုင်ပြီဟုလည်း SSPP/SSAက ပြော သည်။SSPP/SSA နှင့် တပ်မတော်အကြား တပတ်ကျော်အကြာဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲများကြောင့် ဒေသခံ ၁၅၀၀ ကျော် အိုးအိမ်များ စွန့်ခွာ၍ စစ်ပြေးဒုက္ခအဖြစ် မိုင်းရှူးနှင့် မိုင်းနောင်မြို့နယ်များရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် တောတောင်များအတွင်း သွားရောက် ခိုလှုံနေကြ ရသည်။SSPP/SSA အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အားလုံးပါဝင်မှသာ အစိုးရနှင့် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲ ရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး တပတ်အကြာ တာဆမ်ပူး ကူးတို့ဆိပ် တိုက်ပွဲများဖြစ် ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။SSPP/SSA သည် မိုင်းရှူး၊ မိုင်းယန်း၊ တန့်ယန်း၊ ကျေးသီး၊ လားရှိုး၊ သီပေါ၊ နမ့်ဆန်၊ မိုးမိတ် စသည့် မြို့နယ်များတွင် လှုပ်ရှားနေပြီး ၀မ်းဟိုင်းဌာနချုပ်ကို မိုင်းရှူးမြို့နယ်ထဲတွင် အခြေစိုက်ထားကာ ဖယ်ပေးလိုက်ရသော တာဆမ်ပူးကတို့ဆိပ်သည် ဌာနချုပ်အတွက် နောက်ဆုံးကျန်သော ခံကတုတ်တခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။SSPP/SSA အဖွဲ့သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ် စစ်အစိုးရ လက်ထက်က အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နယ်ခြားစောင့်နှင့် ဌာနေ ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့စည်းရေးကို ငြင်းဆန်သည့်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လပိုင်းက စတင်ပြီး တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲများ ပြန် လည် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် အစိုးရနှင့် SSPP/SSA တို့အကြား ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည် ထောင်စု အဆင့် ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ကြသော်လည်း စာချုပ်ချုပ်ပြီးချိန်မှစ၍ ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ နှစ်ဘက် အကြား တိုက်ပွဲပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး SSPP/SSA ၏ အရေးပါသော တပ်စခန်းပေါင်း ၁၀ ခုကျော် ဖယ်ပေးခဲ့ရသည်။
NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (၈)ဖွဲ့ မှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ
မည်သည့်အခါမှ အကောင်းပြောမခံရသောအစိုးရသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်ကုတ်ဟောပြောပွဲ တွင် လုံခြုံရေး အပြည့်ယူပေးမည်
ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံး ဟောပြောပွဲပြုလုပ်မည့် တောင်ကုတ်မြို့ လူထုေ ဟာပြောပွဲတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၁ဦးက အရပ်ဝတ်များဝတ်ဆင်ကာ လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် လုံခြုံရေးယူမည်ဟု တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မြို့နယ်မှူးဖြစ်သူ ဦးတင်အောင်စိုးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၆၁ဦးသည် တောင်ကုတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ၅၂ဦးနှင့် မြို့နယ်လက်အောက်ရှိ အခြားရဲစခန်းသုံးခုမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် သုံးဦးစီ လုံခြုံရေးယူကြမည်ဖြစ်သည်။
“ယူနီဖောင်းနဲ့ဆိုရင် သူတို့ကို နှိပ်ကွပ်တယ်၊ အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်မှာစိုးလို့လေ၊ အဲ့ဒါကြောင့် အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ လုံခြုံရေးယူပေးဖို့ စီစဉ်ထားတယ်” ဟု ဦးတင်အောင်စိုးက ဆိုသည်။
“ရဲတပ်ဖွဲ့ရော၊ မီးသတ်ပါ လုံခြုံရေးယူပေးမယ်ပြောတယ်။ သူတို့ကတော့ အပြင်စည်းပေါ့၊ ဦးတို့ဘက်ကတော့ အတွင်းစည်း” ဟု ဦးထွန်းကြည်က ဆိုသည်။
မြင်ရသလောက် နိူင်ငံရေးပါတီတွေထဲမှာတော့ ...
NLD ကို ဝန်းရံတဲ့ လူအုပ်ဟာ ...
အားရစရာ ကောင်းလှတယ် ...
အတွေးတစ်ခုက ချက်ချင်းပေါ်လာတယ် ...
NLD ထောက်ခံသူ လူတစ်သိန်းရှိတယ် ...
မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုတည်းကဆို ...
အမတ်တစ်ယောက်ပဲ တက်လာမယ် ...
လူ ၈၀၀၀ပဲ ရှိတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုက...
အခြားပါတီကို ထောက်ခံသူ ၅၀၀၀ပဲရှိလဲ ...
တစ်ဘက်က ကိုင်ထားနိူင်လေ ...
NLD အတွက် အန္တရာယ် ရှိလေပဲ....
ဒါမျိုး မဲဆန္ဒနယ်လေးတွေ ....
ဘယ်လောက်ထိ ရှိမယ်ထင်လဲ ?
ဒါက အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ...
မဲပြန့် တဲ့ ကိစ္စ ...
လူ ၁၀၀ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ
Aပါတီ ထောက်ခံသူ ၅၀ ရှိတယ် ...
အခြားပါတီများကို ထောက်ခံသူ ...
၅၀ ရှိတယ်ဆိုပါစို့  ...
မဲဆန္ဒနယ် ၁၀ခု အနက် ...
၃ခုမှာ Aကို ထောက်ခံသူ လူ ၄၀ ရှိနေပြီး ...
ကျန် ၇ခုမှာမှ ...
ကျန်တဲ့ ၁၀ယောက်က ပြန့်ကျဲရှိနေမယ်ဆိုရင်လဲ ...
မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးနိူင်ဖို့  ..
ဘာရယ် မဟုတ် ...
ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုမယ် ထင်လို့  ...
ကြို ထောက်ပြထားတာ ...
ပြီးတော့မှ အာပြဲနဲ့ ...
ငိုကြီးချက်မ ထအော်နေရင် ...
နားငြီးလွန်းလို့  ကိုယ့်လူတို့  ။ ။
11:18 နိုင်ငံရေး အရှုပ်တော်ပုံများ No comments
တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးတဲ့သူတွေမှာ လူရွေးချယ်တာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေ မှန်ကန်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုး လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲက အရာရာကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင် ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါသေးတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတော့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင် ဘယ်သူသမ္မတဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မပဲ ဦးဆောင်သွားမှာပါလို့ ပါတီခေါင်းဆောင်နှုတ်က ထုတ်ပြောလာချိန်မှာ ထောက်ပြစရာ လွဲဟာမှုလေးတွေကို သတိရလာမိပါတော့တယ်။ မှန်တယ်၊ မှားတယ်။ ဆိုးတယ်၊ ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဖတ်ပြီးတဲ့လူတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြဖို့ ငြင်းမရတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကိုပဲ ထောက်ပြလိုက်တာပါ။
၁။ ဒေါ်စုကြည် အကျယ်ချုပ်က လွတ်ပြီးတဲ့အခါ အနားနေ အပါးတော်မြဲအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခံခဲရသသူက ကိုခွန်သာမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဟန်သာမြင့်ရဲ့ ညီငယ် ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ပါတီမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ များစွာရှိပါလျက်ကယ်နှင့် ပြင်ပက ဗိသုကာကို သူ့ရဲ့ အပါးတော်မြဲခန့်ပြီး သွားသမျှခရီးစဉ်တွေမှာ အတူခေါ်သွားတာပါ။ သူ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ ကိုခွန်သာဟာ ပါတီတာဝန်ရှိသူ မဟုတ်ပေမယ့် သူအကျယ်ချုပ်ကျနေတုန်း အိမ်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး နေ့စဉ်ဝင်ထွက်ခွင့် ရခဲ့သူ ဖြစ်လို့ပါတဲ့။ နောက်တော့ ကိုခွန်သာ့ဇနီး မန္တလေးက သူဌေးသမီး မသီတာမြင့်နဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့မိသားစုကိုပါ အိမ်ဝင်းထဲ စည်းရုံးပြီးခေါ်ထားဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါသေးတယ်။ သိပ်အစဉ်မပြေပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ အရှက်လုံးလုံးကွဲတော့တာပါပဲ။ ထိုင်းအစိုးရက NLD ပါတီမှာ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြုတ်သွားတဲ့ သံတမန် ကိစ္စတွေကို နားလည်သူ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိပါလျက်နဲ့ ခေါ်လာပြီး တာဝန်မပေးဘဲ ကိုခွန်သာလိုလူကို ပွဲထုတ်လာလို့ အစီအစဉ်တွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ ထုတ်ပြောလိုက်မှ
နေရာကနေ ဖယ်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါက ပထမအကြိမ် အရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တကယ်တော့ ကိုခွန်သာကို ဖယ်ရှားလိုက်တာဟာ ထိုင်းက ထောက်ပြလို့ သက်သက် မဟုတ်ပါဘူး။ အစားထိုးစရာ ဟစ်ဟော့ အဆိုတော် လူငယ်လေး ဇေယျာသော် ကို တွေ့သွားလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ NLD မှာ အရည်အချင်း ပြည့်စုံပြီး အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့သူတွေ များစွာရှိပါလျက်နဲ့ အရှင်မွေးတော့ နေ့ချင်းကြီးဆိုသလို ဇေယျာသော်တစ်ယောက် ချက်ချင်း ပါတီဝင်ဖြစ်ရုံမက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှားရှားပါးပါး အမတ်နေရာ လေးဆယ်ကျော် ရှိတဲ့အထဲ သူက သူများတွေထက်ကျော်ပြီး ရခဲ့ပါတယ်။ ပါတီဝင်တွေရဲ့ သာရေး နာရေးတောင် ဒေါ်စုကြည်က မအားလို့ မသွားနိုင်တဲ့အချိန်မှာ အနဂ္ဂနှင့် သံသာဝင်းမင်္ဂလာဆောင်ကို ဇေယျာသော်ဖိတ်ပေးလို့ဆိုပြီး ဆယ်လယ်ဘရစ်တီ ဒိတ်အဖြစ်တွဲတက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပခရီးစဉ်မှာ အိုင်ယာလန် တေးဂီတအဖွဲ့ ဘိုနိုက ဒေါ်စုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ ပွဲလုပ်မှာကို မြန်မာအဆိုတော် ဇေယျာသော်လည်း ဝင်ရောက်သီဆိုပေးဖို့ တစ်ရက်လောက် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ရအောင်ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီတို့ကို ဒေါ်စုကြည်နှင့် အတူရောက်နေတဲ့ ဇေယျာသော်ကလည်း တက်မယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်လောက်ကြိုပြီး အိုင်ယာလန်ကိုသွားလိုက်ရင် ဒေါ်စုကြည်ကို တစ်ရက်လောက် ပြုစုမယ့် အနားနေ တပည့် မရှိမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ဒေါ်စုကြည်က ကြိုမလွှတ်ပါဘူး။ ဥရောပ ကြည်ငါးပွင့် ဟိုတယ်ကြီးမှာ အနားနေ ပြုစုမဲ့လူမရှိဘဲ တစ်ညတောင် မနေနိုင်ရလောက်အောင် ဒေါ်စုကြည်ဟာ ဘယ်လောက်များ အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်နေလို့ပါလိမ့်။ အဆိုးဆုံးကတော့ လွှတ်တော်တက်တဲ့ တစ်ရက်မှာ လွှတ်တောာ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အစည်းဝေးခန်းမထဲကို ဝင်ရင် တပ်ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရေး-၁၀၀ လိုကဒ်ပြားလိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာ ဒေါ်စုကြည်ဟာ အဲဒီကဒ်ပြား အိပ်ခန်းထဲမှာ ကျန်ခဲ့လို့ဆိုပြီး ဝင်ရခက်နေလို့ လွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းတွေက နားလည်မှုနှင့် သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ဒေါ်စုကြည်က သူနှင့်အတူ တည်းခိုရာမှာ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ် လိုက်နေတဲ့ ဇေယျာသော်ကို အပြစ်မပြောပါဘူး။ အခြား NLD အမတ်တွေတောင် မျက်လုံးပြုးခဲ့ရပါတယ်။
၃။ အိမ်ခန်း အပါးတော်မြဲပြီးတော့ ရုံးအတွင်းအရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်တင်မေအောင် အကြောင်းလည်း မပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ သူဟာ အရင်တုန်းက ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ် ရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှာ အရာရှိပါ။ အဲလိုလုပ်နေရင်းနှင့် သူနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို သူတို့ရုံးမှာ မိတ်ဆက်ပြီး ခေါ်ခန့်ပါတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီဆရာဝန်ဟာ တစ်ချိန်က ထောင်ကျဖူးပါတယ်။ ကျဖူးတာကမှ ကလေးမုဒိမ်းမှုနှင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ကလေးသူငယ်တွေ အလွဲသုံးစားလုပ်ရာမှ ကာကွယ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီလို ရာဇဝတ်ကြောင်း သမိုင်းမကောင်းတဲ့ လူကိုမှ ခန့်ရပါ့မလားဆိုပြီး ဒေါ်တင်မာအောင်ကိုပါ ကုလကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အဲဒီ ဒေါ်တင်မာအောင်ဆိုသူဟာ ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ ရုံးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အိုဘားမားတွေ၊ ဘန်ကီးမွန်းတွေကို တစ်ဝိုင်းထည်း ဝင်ထိုင်ပြီး ချယ်လှယ်နေပါတော့တယ်။
အဲတော့ ဖြစ်ခဲ့တာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကောင်းတာ ဆိုးတာ ဝေဖန်နေတာထက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုယ်ထောက်ခံမယ့်ပါတီဟာ ဘယ်လိုပါတီမျိုးလည်းဆိုတာလေး သိရအောင် အချက်အလက်တွေကိုသာ တင်ပြလိုက်တာပါ။ သူတို့ အာဏာမရခင်မှာတောင် အခုလို ဖြစ်လရပ်လေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ အကယ်လို့များ အစိုါး်ရဖြစ်သွားရင် ဘယ်လို တွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ
လောက်ကိုင်မြို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး အပါအ၀င် စုစုပေါင်းခြောက်ဦးအား မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
10:55 ကြားဖြတ်သတင်း No comments
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လောက်ကိုင်မြို့နယ်၊ တောင်ညီနောင်ဂိတ်၌ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းနှင့် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင် သောလုံခြုံရေးအဖွဲ့သည် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်တွင် လောက်ကိုင်မြို့မှ ရန်လုံကျိုင်းဘက်သို့ မောင်လွင်မောင် ၂၈ နှစ် (ဘ) ဦးဝင်းရွှေ မောင်းနှင်လာသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ဆိုင်ကယ်နောက်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ ပေါ်ပေါ်ကျိုင်းရွာနေ လီလောက်ယုံ ၃၇ နှစ် (ဘ) ဦးလိန်ချင်ထံမှ ပေါင်ရင်းနှစ်ဖက်တွင် အိတ်အ၀ါရောင်ဖြင့် ကပ်ထားသော စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား အထုပ်ကြီးနှစ်ထုပ် (၄၀၀၀ ပြား)(ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၆၀ ခန့်)အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော လီလောက်ယုံအား စိစစ်မေးမြန်းချက်အရ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများကို လောက်ကိုင်မြို့နေ ကျုံးယူချိန် ၂၅ နှစ် (ဘ) ဦးရှင်ဆန်းက တရုတ်နိုင်ငံ၊ နမ့်ဆန်မြို့သို့ ပို့ဆောင်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ကျုံးယူချိန်၏နေအိမ်ကို ဆက်လက်ရှာဖွေရှင်းလင်းရာ ၎င်းနှင့်အတူ လောက်ပါး ၂၃ နှစ်(ဘ) ဦးယွီလောက်ဖန်း၊ လူရှောက်နိန် ၁၇ နှစ် (ဘ) ဦးလောက်ကျန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများဖြစ်သော ယုံထယ်မြို့နေ လီတိုက်ဖူ ၄၀ နှစ်(ဘ) ဦးလီပေါရှိန်၊ မလော်ရှောက်လိန် ၄၀ နှစ်(ဘ) ဦးလောက် ကျီဖိန်တို့အား မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများမှာ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၇၉၇၉၂ ပြား (ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁၁၉၆ သိန်းကျော်)နှင့် အိုက်စ် ၄ ဂရမ်(ကာလ တန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၈၀ ခန့်)တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့နှင့်အတူ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အသုံးပြုသည့် လိုင်စင်မဲ့မော် တော်ယာဉ်တစ်စီး၊ မော်တော် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး၊ အစိမ်းရောင်သေတ္တာ အသေးတစ်လုံး နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိန်ခွင်တစ်ခုတို့အား သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးသည် လောက်ကိုင်ဒေသသို့လာရောက်ပြီး မူးယစ် ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ကာ ထွက်ရှိသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ နမ့်ဆန် မြို့သို့ ပြန်လည်ရောင်းချနေသူများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော တရားခံခြောက်ဦးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား လောက်ကိုင်ရဲစခန်းသို့ စနစ်တကျလွှဲပြောင်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
09:58 NLD No comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အင်္ဂလိပ်မယား ၊ကုလားယူထားသော မျိုးဖျက်မဟု
အော်ပြောခဲ့သော ဟိုင်းကြီးကျွန်းမှဆယ်အိမ်မူးတစ်ဦးအား တရားဆွဲဆိုထားပါသည်။
တရားရုံးမှ ထိုအမူ့ အား ပုဒ်၅၀၀-အသရေဖျက်မူ့ ဖြင့် တရားဆွဲဆိုမူ့ အားလက်ခံ
ထိုဖြစ်ရပ်များနှင့့်် ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်အား စော်ကားထားသောအမူ့ များ
နိုင်ငံတော်သမတ ကြီးအား အွန်လိုင်းတွင် စော်ကားထားသော အမူ့ များနှင့်နိုင်းယှဉ်
ကြည့်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေးသည် တရားမျှတမူ့ ရှိလာကြောင်း
သုံးသပ်ရပါသည်။ အစိုးရထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များအားဝေဖန်သူများအား အရေးယူပါက
အာဏာရှင်အစိုးရဟု ဝေဖန်ကြသော်လည်း NLD အား ဝေဖန်သူတရားစွဲခံရသော
အခါ မည်သူ မျှ အာဏာရှင်ဟု ဝေဖန်ကြခြင်း မရှိပေ။
အပစ်ရပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု အမေရိကန် ချီးကျူးကြိုဆို
09:30 တပ်မတော်သတင်း No comments
အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၅
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို ဒီကနေ့ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့တို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ နေပြည်တော် မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအပြီးမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂျွန်ကာဘီက ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ် ပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိသေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စစ်ရေးအရ အရေးယူတာတွေပြုလုပ်ခြင်းဟာ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လည်း ကြေညာချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရှည်ကြာဆုံး ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းနေတာကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အတိအလင်းချီးကျူးကြောင်း၊ ဒီကနေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ အချို့အဖွဲ့အစည်းတွေ မပါနိုင်တာကို သတိပြုမိသလို၊ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်း နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း၊ ကျန်နေသေးတဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက် အပြုသဘောဆောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း၊ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာ ထိုးစစ်တွေဆင်နွှဲနေတာ၊ အဲဒီနေရာတွေက ပြည်တွင်းနေရပ် စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ ၁ သိန်းကျော်ထံ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ရောက်ရှိဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့အပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း၊ သူတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ အမြန်ဆုံးပေးအပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးကြောင်း အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။
ဆီးရီးယားတွင် ရုရှားအနေဖြင့် TOS-1A အမျိုးအစား ဒုံးကျည်လက်နက်များ ဖြန့်ကျက်
08:52 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
ဆီးရီးယားတွင် ရုရှားအနေဖြင့် TOS-1A အမျိုးအစား ဒုံးကျည်လက်နက်များ ဖြန့်ကျက် အသုံးပြုသွားရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
တောက်ပသောကြယ်ဟု နာမည်ပြောင် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည့် အဆိုပါ လက်နက်စနစ်တွင် ဒုံးကျည် အများအပြားကို ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး မြို့ကြီး တစ်မြို့၏ ရပ်ကွက်ရှစ်ခုစာမျှ အကျယ်အဝန်းကို ပြားပြားဝပ်သွားစေနိုင်သည်အထိ ဖျက်ဆီးအား ပြင်းထန်ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယားတွင် သမ္မတ ဘာရှာအယ်လ်အာဆက်ဒ်ဘက်မှ ပါဝင်ကူညီပြီး အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော် (အိုင်အက်စ်) စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့နှင့် အခြားသော သူပုန်များကို လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်လျက် ရှိသည်။ ယခုအခါတွင်မူ ရုရှားသည် တင့်ကားပေါ် တင်ဆောင် ပစ်ခတ်နိုင်သည့် ဒုံးကျည်လက်နက်များကိုပါ ဆီးရီးယားတွင် ဖြန့်ကျက်သွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၃၀ မှ စတင်ကာ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရုရှားသည် အောက်တိုဘာ ၁၃ နှင့် ၁၄ ရက်များတွင် အိုင်အက်စ်ပစ်မှတ် ၄၀ ကျော်ကို ဗုံးကြဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကြေညာခဲ့သည်။
TOS-1A ဒုံးကျည်လက်နက် စနစ်သည် T-72 တင့်ကားတစ်စီးပေါ်တွင် အထိုင်ချ တပ်ဆင်ထားပြီး ဒုံးကျည် ၂၄ စင်းမှ အစင်း ၃၀ ထိ တစ်ပြိုင်တည်း ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် တည်ဆောက်ထားသည်။ မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်လာသည့် ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားများအရ ရုရှားတို့သည် အနည်းဆုံး TOS-1A လက်နက်တင် တင့်ကား တစ်စီးကို ဆီးရီးယား စစ်မြေပြင်တွင် စတင်အသုံးပြုနေပြီဟု ယူဆရသည်။
IBTimes သတင်းစာက အောက်တိုဘာ လဆန်းတွင် အဆိုပါ လက်နက်စနစ်များ ဆီးရီးယားသို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မီးလောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဒုံးကျည်လက်နက်များ အသုံးပြုခြင်းသည် ဆီးရီးယား စစ်မြေပြင်တွင် တိကျမှု မရှိသည့် လက်နက်များ အသုံးပြုနေကြောင်း ရုရှားအပေါ် စွပ်စွဲမှုများကို ပိုမို အားကောင်းလာစေသည်။
အမေရိကန်နှင့် အနောက်အုပ်စု နိုင်ငံများက ရုရှားသည် ဆီးရီးယား စစ်ပွဲတွင် တိကျသည့် ပစ်မှတ်ရှာစနစ် မပါဝင်သော စစ်လက်နက်များကို အသုံးပြုနေသဖြင့် အရပ်သားများပါ ထိခိုက်နေကြောင်း စွပ်စွဲထားသော်လည်း ရုရှားကမူ ယင်းကို ငြင်းဆိုထားသည်။
08:16 ဆေးပညာများ No comments
အမျိုးသမီးများကို ချက်ခြင်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားစေနိုင်တဲ့ မှို တစ်မျိုး
18:00 ဆေးပညာများ No comments
ကနုကမာကောင်တွေနဲ့ ချောကလက်တွေဟာ လိင်စိတ်ကိုနိုးကြွစေတဲ့ အစားအစာတွေအဖြစ် ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟာဝိုင်ရီမှာရှာတွေတဲ့ ထူးဆန်းမှိုနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူတို့ရဲ့ နိုးကြွစေမှုနှုန်းက သိပ်တော့ မသိသာလောက်တော့ပါဘူး။
ဒီ လိမ္မော်ရောင်တောက်တောက် မှိုကို မျိုးစိတ်အမည် မပေးရသေးပါဘူး။ မီးတောင်တောင်စောင်းတွေမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး အာနိသင်လဲပြင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနံ့ဆိုးဆိုးရှိပြီး အမျိုးသမီးတွေကို ကာမပိုင်းမှာ ကောက်ကာငင်ကာ အထွတ်အထိပ်ရောက် သွားစေနိုင်ပါတယ်။
အခုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ ထူးဆန်းမှိုတွေဟာ သက်တမ်း ၆၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ ကြားရှိတဲ့ မီးတောင်ချော်ရည်အနည်အနှစ်တွေပေါ်မှာ ပေါက်တာပါ။ ရှည်ထွက်မှုနှုန်းမြန်ပြီး အပွင့်ပွင့်ဖို့အတွက်ကို ၄၅မိနစ်ပဲကြာပါတယ်။
လေ့လာမှုပြုရာမှာ အမျိုးသမီး ၁၆ယောက်နဲ့ အမျိုးသား အယောက် ၂၀ ပါရှိခဲ့ပြီး မှိုကိုနမ်းကြည့်စေတဲ့ အခါမှာ အနံ့ဆိုးရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ထူးဆန်းမှိုရဲ့အနံ့က အမျိုးသမီး ၆ဦးကို ချက်ချင်းပဲ အထွတ်အထိပ်ရောက်သွား စေခဲ့ပြီး ကျန် အမျိုးသမီး ၁၀ယောက်ကတော့ ရှူရှိုက်မှုနည်းခဲ့ပြီး နှလုံးခုန်မြန်လာတာကို ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီမှိုတစ်မျိုးတည်းရဲ့ အနံ့ဆိုးမှာသာ သိသာတဲ့ လိင်စိတ်နှိုးကြွမှုကို ဖြစ်စေတာပါ လို့ သုတေသနရပ်က ရှင်းပြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုတစ်ခုတည်းသာရှိသေးတာကြောင့် ထူးဆန်းမှိုရဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ စွမ်းအားတွေကို အတည်ပြုဖို့အတွက် နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်သေးတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက မှတ်ချက်ပြုကြပါတယ်။
တရုတ်ဆေးဝါးမှာတော့ ဒီထူးဆန်းမှိုကို ယောင်ယမ်းမှု၊ အစာအိမ်အချဉ်ပေါက်မှုနဲ့ အာရုံကြောရောဂါတွေ ကုသတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ တရုတ်တောင်ပိုင်းမှာ ချောင်းဆိုး၊ ပိုးဝင်၊ အစာအိမ်ယောင် နဲ့ လူကီးမီးယား တို့ကိုကုသရာမှာ ဆေးမြီးတိုအဖြစ် ဆက်လက်သုံးစွဲနေကြဆဲပါ။
17:20 တပ်မတော် သတင်း No comments
ငိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် မပါဘဲ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးပွဲ
16:37 တပ်မတော် သတင်း No comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း ရှစ်ဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို အပြန်အလှန် လဲလှယ်ကာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
၁။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
၂။ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း
၃။ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ဦးဥာဏ်ထွန်း
၄။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း
၅။ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်
၆။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
၇။ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း
၈။ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဒေါက်တာထွန်းရှင်
၉။ UPWC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်
၁၀။ UPWC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှင့်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ -
၁။ KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး
၂။ RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်
၃။ KNU/KNLA (Peace Council) ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဌေးမောင်
၄။ PNLO ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်မြင့်ထွန်း
၅။ CNF ဥက္ကဋ္ဌ ပူးနန်လျန်ထန်
၆။ ALP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်
၇။ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော် သံခဲ
၈။ DKBA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောလားပွယ်
14:00 ပြည်သူ့ အသံများ No comments
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးကို စော်ကားလို့ အရေးယူတာဟာ
လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို စော်ကားလို့ အရေးယူတာမဟုတ်ပါဘူး၊
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့ ရာထူးကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်နေပါစေ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်စော်ကားတာနဲ့ အရေးယူတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ သမ္မတရာထူးကို မည်သူထမ်းဆောင်နေပါစေ(NLDပါတီဝင်ဖြစ်နေပါစေ)ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစော်ကားလျှင်လည်း အရေးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချောစန္ဒီထွန်းကိစ္စဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အရေးယူခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို စော်ကားထားတဲ့အပြင် တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ယူနီဖောင်းကိုလည်း စော်ကားထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျောင်းယူနီဖောင်း(ဖြူ/စိမ်း)ကို မြတ်နိုးကြပါတယ်။ ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံကို သရုပ်ပျက်ဝတ်ဆင်ခွင့်မပေးထားသလို၊ စော်ကားလှောင်ပြောင်ခြင်းလုပ်လျှင်လည်း ကျောင်းစည်းကမ်းအရ အပြစ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်သားတွေလည်း စစ်ယူနီဖောင်းကို မြတ်နိုးပါတယ်။ တပ်မတော်ယူနီဖောင်းကို စော်ကားရင်လည်း နိုင်ငံတော်မှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့အရေးယူတာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာမဟုတ်သလို၊ နိုင့်ထက်စီးနင်းပြုလုပ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။
မည်သူ့ကိုမျှ စော်ကားခြင်းမပြုလုပ်ပဲ၊ စစ်မှန်တဲ့ လက်တွဲခြင်းနဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ပုခုံးထမ်းတာဝန်ယူနိုင်ကြပါစေဗျာ .....
13:20 အသုံးမကျသော ဒေါ်စု No comments
အမေ့ရင်မှာ ပိုက်ထားတဲ့ စာအုပ်က ကျမ်းမြတ်ကိုရမ် လေ့လာရေးဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်ပြောမပြတတ်အောင်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ အမေ့ရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဝင်တွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ဖြစ်စေတယ်။ အမေအာဏာရရင် မဘသ နေဝင်ချိန်၊ ကျွန်တော်တို့ နေထွက်ချိန်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဗလီတွေအစားထိုးမယ်။ ဘုန်းကြီးတွေနေရာမှာ ဗလီဆရာတွေဝင်လာခဲ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားခဲပြီး အမေအာဏာရမှာကို စောင့်နေကြတယ်အမေ။
အမေ့ကို ကျွန်တော်တို့ အားကိုးပါတယ်။ အမေ့ကို အရမ်းကြီးလည်းမျှော်လင့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျမ်းမြတ်ကိုရမ်ကိုရော ကိုရမ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုရော အခုလို ရင်ဝယ်မှာအပ် ချစ်မြတ်နိုးပေးတဲ့အတွက် အမေ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေ။
ပုံ/ အလ္လာရှင်မြတ်၏ သားတော် မိုဟာမက် ဂျွန်ကီး
12:27 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
ပါတီငယ်တွေအနေနဲ့ Online ပေါ်မှာပါတီ ကိုယ်စားပြု Pageတွေအကောင့်တွေဖွင့်ပြီးစည်းရုံးရေးပြုလုပ်ခြင်း၊
မြေပြင်မှာ နယ်မြေခံလူထုနဲ့ထိတွေ့ပြီးမဲဆွယ်ခြင်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ကျန်တဲ့ပါတီငယ်တွေနဲ့မတူပဲ
အလှပြယာဉ်မျိုးနဲ့မဲဆွယ်ကြသလို စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ရတဲ့Print Mediaတွေပေါ်မှာပါပါတီကိုယ်စားပြုမဲဆွယ်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒီအထဲကမှတစ်မျိုးတမည်ထူးခြားနေတဲ့Print Mediaတစ်ခုကတော့ သောင်းစုငြိမ်းရဲ့ 7Day ဂျာနယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်မရခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရခေတ်မှာတောင်မှ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့ပြီး စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတင်ပဲ
7Day Newsဂျာနယ်၊အင်တာနက်ဂျာနယ် စတာတွေကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သူလဲဖြစ်ပါတယ်၊
7Dayဂျာနယ်စတင်ထုတ်ဝေစဉ်မှာတော့ အယ်ဒီတာဟာ လက်ရှိ ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုရဲ့ CEO ဦးကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်)ဖြစ်ပြီး အတော်အတန်အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့
အချိန်မှာတော့သောင်းစုငြိမ်းအတွက် မလိုအပ်တော့တဲ့ဦးကိုကို ကို 7Day အသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ကန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။်၊ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၄ခုနှစ်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ အစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုစလင်မြို့မှာ
ကျင်းပတဲ့E-Government သင်တန်းကိုသွားရောက်လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သောင်းစုငြိမ်းဟာ သူ့အဖေအရှိန်နဲ့ ၀န်ကြီးရုံးတွေ အခြားအစိုးရရုံးတွေမှာ
E-office E-Governmentစတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို ဈေးနှုန်းမတန်တဆနဲ့ရောင်းချပါတော့တယ်။အဲ့သည့်E-Office E-Governmentစနစ်တွေဟာအခုချိန်ထိလဲအောင်မြင်မှုမရှိပဲ
အခုလိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့စီးပွားရှာနိုင်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးစိုးသာမှစပြီး အဆက်ဆက်နဲ့ပိုင်အောင်ပေါင်းခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိမှာလဲ အောင်စိုးသာတို့နဲ့ပေါင်းသင်းနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစိုးသာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦး သိန်းဇော်ဖြစ်လာတော့ဦးသိန်းဇော်နားအဘအဘနဲ့ပြေးကပ်ပြီး လက်ရှိဝန်ကြီးတွေအဆက်ဆက်နဲ့ပါမကင်းခဲ့သူပါ။
အဘအဘနဲ့ လုပ်စားလာခဲ့တာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအများစုမှာ သူဟာနေရာတစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်၊
Informatrixလို IT Companyထောင်ကာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိတဲ့ ITလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပက်သက်သမျှလုပ်ငန်းတွေမှာလဲ ပါဝင်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်များအသင်းမှာလဲ
အခုရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ သောင်းစုငြိမ်းအနေနဲ့ NLDဖက်ကိုရုတ်တရက်ကြီး ပင်းသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်၊
သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ 7Day Newsဂျာနယ်,7Day Daily စတဲ့ Print media စာမျက်နှာပေါ်မှာ NLDအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နေရုံသာမက
NLDရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ပန်ဖလက်တွေလဲ တစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ချိဖို့အတွက်ကို သူက ဒီဇိုင်းဆွဲပေးဖြန့်ချိပေးစသဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊
အရင် စစ်အစိုးရခေတ်ကောင်းခဲ့စဉ်က အဘအဘနဲ့ တစ်သက်လုံးကောင်းစားလာတဲ့သောင်းစုငြိမ်းဟာ အခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုကြောင့်ချက်ချင်း
ကြီးကိုအမအမ ဖြစ်သွားရသလဲဆိုတာကတော့ 7Dayရဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့အတော်လေးကိုစဉ်းစားရကြပ်လာပါတယ်၊
စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဆိုတာဟာ ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ ကြားနေပြီးမျှမျှတတရေးသားကာပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ရွက်မှသာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ခေါ်ထိုက်တာပါ၊
တစ်ဖက်ဖက်ကို ပင်းနေရင်တော့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်မဖြစ်နိုင်ပဲ
အဘဘက်ပင်းရင်တော့ အဘဘောမမဏ္ဍိုင်ဖြစ်ပြီး၊ အမဘက်ပင်းရင်တော့ တဖုတ်သ မဏ္ဍိုင်လို့ပဲ စာရှုသူတွေကမည်တပ်မှာပါ။
အရင်တုန်းက စစ်အစိုးရဆီက ကပ်စားခဲ့ပြီး အခုအချိန်ကျမှ စစ်အစိုးရမကောင်းပါဘူးလို့ ဂျာနယ်စာမျက်နှာကြီးထက်မှာ တွင်တွင်အော်နေတာတော့ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိသူတွေ
စစ်အစိုးရခေတ်က ၀န်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းစားခဲ့တဲ့သူကြီး၊လက်ရှိအစိုးရ၀န်ကြီးတွေနဲ့လဲ မကင်းသူကြီး၊တစ်ချိန်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့သားဖြစ်သူကြီး၊
နေ့ချင်းညချင်းဆိုသလို အဘအဘကနေ အမအမ ဘ၀ကိုပြောင်းသွားတဲ့သူကြီး
7Day အုပ်စုရဲ့ ပိုင်ရှင်ကြီး သောင်းစုငြိမ်း ဘာလဲ ဘယ်လဲဆိုတာတော့ကျနော်တို့ ပြည်သူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေက သိချင်လှပါတယ်ဗျာ့။
From:__ Admin: PS
12:24 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
သဘောမျိုးသာဆောင်နေပါတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူ ၀ါဒမှိုင်းတွေတိုက်ခံနေရသလိုပါပဲ
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် လက်ရှိအစိုးရကိုသာတိုက်ခိုက် အတိုက်အခံများရဲ့ သတင်းများသာဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြနိုင်ပီဆိုရင် လူဖတ်များမယ်၊ရောင်းအားတက်မယ်။
တကယ်တော့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် တစ်နှစ်ကျော်ကာလမှာ ဖော်ပြလို့တောင် မရနိုင်တဲ့ တိုးတက်မှုတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေကို ဘယ်ခေတ်ကာလနဲ့မှ မတူအောင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြလာနိုင်ပါတယ်။ မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်ကို ထောက်ပြနိုင်တဲ့ သတင်း၊ သတင်းဆောင်းပါးတွေလည်း အများအပြား ရေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးခုံးမ တစ်ကောင်နှစ်ကောင်ကတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ် ချိုးဖေါက်ပြီး အစိုးရ နဲ့ ပုဂ္ဂလိကတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိုးနှက်တာတွေ အပါအ၀င် မဆင်မခြင် ရေးချင်သလို ရေး၊ ဖော်ပြချင်သလို ဖော်ပြတဲ့ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေလည်း ရှိန်ေခဲ့ပါတယ်။ လူဗြိန်းကြိုက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲဒီ စာစောင်တွေ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းလည်း ကောင်းပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီ သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေရဲ့ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ် ချိုးဖေါက်တာတွေကို ထောက်ပြသူ မရှိတာပါ။ အစိုးရကလည်း စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့် ပိတ်ပင်တယ် အမြင်ရောက်မှာစိုးလို့ ဘယ်လောက် ဆိုးဆိုး တရားမစွဲပါ။ အဲလို ဖြစ်လာလေလေ၊ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် ချိုးဖေါက်မှုက များလေလေပါပဲ။ ခုတော့ အဲဒီ နည်းနဲ့ လူကြိုက်များ၊ ဈေးကွက်ရ၊ ၀င်ငွေဖြောင့်တာ တွေ့လာလို့ အခြားနယ်ပယ်က လူတွေပါ စာနယ်ဇင်းလောကထဲ ဒိုင်ပင်ပစ် ၀င်လာနေကြပါပြီ။ ဈေးကွက်ကလည်း စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ် အချိုးဖေါက်ဆုံး၊ အဆဲနိုင်ဆုံး စာစောင် ရောင်းကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ဘက် ဦးတည်နေပပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေကြောင့် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အစိုးရက ပြန်ထိန်းမယ် ဆိုတာမျိုးကိုတော့ မကြားရပါ။ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ် ချိုးဖေါက်တဲ့ စာစောင်တွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်ဖြစ်၊ စာစောင် တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ MJA, MJN, MJU လို စာနယ်ဇင်း အဖွဲ့တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စာနယ်ဇင်းကောင်စီကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်ဝေဖန်ထောက်ပြပေးနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဝေဖန်ထောက်ပြ တာကို တရားစွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တာမျိုး၊ အခြားနည်းနဲ့ အကြပ်ကိုင်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ရင်လည်း စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ကြရပါမယ်။နိုင်ငံတကာမှာ လူဆိုးဂုဏ်းတွေ၊ အဂတိလိုက်စားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရင်း၊ စစ်သတင်းလိုက်ရင်း အန္တရာယ်ကြုံကြရတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ အခြေအနေလောက်လည်း မပြင်းထန်ပါဘူး။ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့ ရဲရဲ့ဝန့်ဝန့် တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြသလို၊ ရလာတဲ့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးနေသူတွေ ဖျက်ဆီးနေကြတာကိုလည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စာနယ်ဇင်းသမားကောင်း မှန်သမျှ ကာကွယ်ရမယ်သာ ဖြစ်ကြောင်းပါ။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ရဲ့စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ကြီးများအနေဖြင့် သဘာဝမကျရင်နေပါစေ မှန်ကန်သော သတင်းများဆောင်ကျဉ်းပေးစေ ချင်ပါတယ်။ ပါတီတစ်ခုခုအတွက် လော်ဘီတွေအဖြစ်ဖြင့် ရျှိနေတာမျိုးတွေ၊အဖွဲ့ စည်းတစ်ခုခုအတွက် ဆောင်ရွက်နေခြင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ ဘက်မလိုက်သော၊အမှန်တရားများကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့မီဒီယာမျိုးကိုသာလိုလားမိပါတယ်။ လိုလားမိတယ်ဆိုမှတော့ ဒီလိုမီဒီယာမျိုးတွေကျွန်တော်တို နိုင်ငံမှာမရှိသေးလို့ ပါပဲ။ကလောင်တစ်ချောင်းစွမ်းခဲ့ ရင် လူအကျိုးဆောင်နိုင်သလို အဆိပ်ဖြစ်စေမယ့် ကလောင်မျိုးဆိုရင်လည်း များစွားအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးတွေမှာပါ တွေ့ ရှိခဲ့ ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ တုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ အရေတွက်တစ်ခုထိသာထိရောက်နိုင်ပါတယ်။ကလောင်သတ်ရင်တော့ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေ၊ခံယူချက်တွေ၊မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးကိုသတ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရေတွက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ယခုကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေဖြင့် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေရရှိပြီးနောက်မှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ဟာ လေးခြောင်းထောက်ကြီးများအနေဖြင့် ယခုအမြင်များဟာ သာမန်ထက်တော့ထူခြားမှု့ မရှိဘူးလို့ ပဲ မြင်မိပါတယ် ။လွတ်လပ်ခွင့်ကြီးဟာ ကာဗာ(Cover)
From:__Oo Myo Min
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖုိုး၏ မိန့်ခွန်း
12:06 KNU No comments
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်
ချစ်ကြည်လေးစားရပါသော နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့တကွ တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တုိုက်ခုိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် - NCA လက်မှတ်ရေးထုိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြတဲ့ နုိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ လွှတ်တော် နာယကများနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်သေအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထုိုးကြမယ့် နုိုင်ငံတကာမှ အသိသက်သေ ကုိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်တွင်းမှ အသိသက်သေ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကုို ဘက်ပေါင်းစုံကနေ တစိုက်မတ်မတ် အထောက်အကူပြုနေကြတဲ့ နုိုင်ငံတကာမှကုိုယ်စားလှယ်များ၊ သံတမန်များ၊ အထူးဖိတ်ကြားခြင်းခံထားရတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဧည့်သည်တော်များနဲ့ တုိုင်းရင်းသားညီအစ်ကုိုမောင်နှမများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် - NCA ရရှိရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတလျှောက်မှာ အင်တုိုက်အားတုိုက်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နှစ်ဖက်သော ခေါင်းဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်အဖွဲ့များ၊ အထောက်အကူပြုသူများ အားလုံးနဲ့ သတင်းမီဒီယာများအားလုံးကုို မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်။
ဒီလုို ဂုဏ်ရောင်ထွန်းပြောင်တဲ့ သမုိုင်းဝင်အခမ်းအနားမှာ လက်မှတ်ရေးထုိုး ကြမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ကိုယ်စား ကျွန်တော့်ကို မိန့်ခွန်းပြောကြားခွင့် ပြုတဲ့အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကျေးဇူးဥပကာရ တင်ရှိပါကြောင်း ဦးစွာ ပြောကြားလုိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက နှစ်ရှည်လများ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များတို့ဟာ ဒီ တစ်နုိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ကို ရရှိဘို့ (၂) နှစ်နီးပါး အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြရပါတယ်၊
နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဘက်တွေအကြား ရဲရင့်တက်ကြွတဲ့အားမာန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် အဖြေရှာလုိုတဲ့ အာသီသကုို အခြေခံကြလုို့ ဒီ တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် - NCA ကုို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သမုိုင်းစာမျက်နှာသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေဟာ အလျှော့အတင်းပြုလုိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အခက်အခဲတွေကုို အတူတကွ ပူးပေါင်းဖြေရှင်းလုိုတဲ့ဆန္ဒ၊ နုိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို နုိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလုိုတဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်၊ ဆွေးနွေးဘက်တစ်ဖက်စီမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်တွေအကြား ထိန်းသိမ်းထားနုိုင်တဲ့ညီညွှတ်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် - NCA လက်မှတ် ရေးထုိုးခြင်းဟာ သာမန် အပစ်ရပ်စာချုပ်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထုိုးတာ မဟုတ်ဘဲ ဒီမုိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနုိုင်ငံထူထောင်ရေး လျှောက်လှမ်းရမယ့် ခရီးရှည်ကြီးရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်း ဖြစ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုများစွာကလည်း စောင့်ကြိုနေပါတယ် ဆိုတာကိုလဲ သတိပေးလုိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်နုိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် - NCA ကုို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်အခက်အခဲ ကြောင့် ကွဲလွဲနေတဲ့ အယူအဆအချို့ကုို တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် - NCA လက်မှတ်ရေးထုိုးအပြီးမှာ အမြန်ဆုံး ဆက်လက်ဆွေးနွေးဘုို့ ယူဆောင်သွားရမဲ့ အချက်တွေ ဆွေးနွေးကြရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တုို့အားလုံးဟာ စိတ်ရှည်သည်းခံကာ အခက်အခဲ အားလုံးကုို နောက်မဆုတ်စတမ်း အတူတကွ ကျော်ဖြတ်ကြဖို့ ကုိုလည်း သက်ဆုိုင်သူအားလုံးကုို တောင်းဆုိုလုိုပါတယ်။
နုိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ (EAO) နဲ့ အစုိုးရ၊ လွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်က ကုိုယ်စားလှယ်တွေသာမက နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အခြားပါဝင်သင့်ပါဝင်ထုိုက်တဲ့ ကုိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်လာကြမှာဖြစ်လုို့ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်သဘောထား အမျိုးမျိုးနဲ့ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ အသီးသီးရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုသာ ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ အပြန်အလှန် လေးစားတန်ဖိုးထားမှုနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ဦးတည်ကာ အားလုံးပါဝင်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကတဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်တဲ့အထိ ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိဘုိုို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာဘဲ တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် - NCA ကုို သဘောတူလက်ခံသော်လည်း လတ်တလော ပါဝင် လက်မှတ် မရေးထုိုးနိုင်သေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ထပ်မံ ပါဝင်လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဖော်ဆောင်ရာမှာလည်း တပ်မတော်အနေနဲ့ အင်အားသုံးတဲ့နည်းထက် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းကုို အသုံးပြုဖို့ အလေးထား တောင်းဆုိုတိုက်တွန်း လုိုပါတယ်။
၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာရေး လမ်းဖွင့်ပေးရာမှာ၊ စစ်ရေးတင်းမာမှု လျှော့ချရေးကို အထောက်အကူပြုမယ့် ယန္တရားဖန်တီးထားခြင်းဟာ အရေးပါပြီး၊ တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်မှာ အတူတကွ လက်မှတ်ရေးထုိုး ထားကြတဲ့ မိမိတို့ခေါင်းဆောင်တွေအကြား ညှိနှိုင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းနည်းလမ်း ရှာဖွေပါဝင် ကြဘုို့ လုိုပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ မြန်မာ့သမုိုင်းမှာ တစ်ကြိမ်တခါမျှ မပေါ်ပေါက်ဘူးသေးတဲ့ နုိုင်ငံတော်အစုိုးရနှင့် တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့အကြား တစ်နုိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲလုိုက်နုိုင်ခြင်းဟာ ထူးခြားအောင်မြင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး "သမုိုင်းစာမျက်နှာ" သစ် ဖွင့်လုိုက်ပြီလုို့လဲ ဆုိုနုိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိမိတုို့ရဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ ခါးသီးစွာ တွေ့ကြုံခံစားလာခဲ့ ကြရတဲ့ လက်နက်ကုိုင်ပဋိပက္ခရဲ့ ဆုိုးမွေများအားလုံးကုို ဒီမှာတင် ပြည်ဖုံးကားချရေး ကြိုးပမ်းကြပြီး အနာဂါတ်မျိုးဆက်သစ် ပြည်သူပြည်သား လူငယ်လူရွယ်များအတွက် "ငြိမ်းချမ်းရေး" ဆုိုတဲ့ အမွေအနှစ်ကုို ချန်ရစ်ထား နိုင်ဖို့၊ တရားမျှတမှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှု တို့အပေါ်အခြေခံတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆက်ဆက်ကုို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နုိုင်ရေး သန္နိဋ္ဌာန်ချထားကြဖို့နဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကနေ နိုင်ငံရေးအဖြေ မထွက်သေးခင် ကာလမှာ ဖိအားပေးမှုတွေကုို ရှောင်ကျဉ်ကြကာ ဒီမုိုကရေစီနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကုို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုကုို တည်ဆောက်ဖုို့ အုတ်မြစ်ချနုိုင်ရေး မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းကြပါစုို့ - လုို့ ဒီကနေ့ အခမ်းအနားကုို ဂုဏ်ပြုရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။